Madaxweyne Trump Oo Waji-gabax Kala Kulmay Maxkamadda Ugu Sarraysa Mareykanka – somalilandtoday.com
Madaxweyne Trump Oo Waji-gabax Kala Kulmay Maxkamadda Ugu Sarraysa Mareykanka
(SLT-Washington)-Maxkamadda ugu sarraysa waddanka Mareykanka ayaa gaashaanka u daruurtay iskuday aanan noociisa oo kale hore loo arag oo meesha loogaga saari rabay natiijooyinka doorashadii ka dhacday afar gobol oo aad loogu loolamay, dacwaddaas oo uu badhitaarayay Madaxweyne Donald Trump.
Dacwadda ayaa waxaa toddobaadkii tegay maxkamadda geeyay madaxda gobolka Texas, iyagoo doonayay in sharci-darro laga soo qaado natiijooyinka doorashooyinkii ka dhacay gobollada Georgia, Michigan, Pennsylvania iyo Wisconsin.
Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa dhammaan afartaasi gobol ku guulaystay.
Dacwadda ayaa waxaa taageerayay xeer ilaaliyayaasha 18 gobol oo Mareykanka ku yaalla iyo 106 xubnood oo Jamhuuri ah oo ka tirsan Koongareeska.
Hasayeeshee Maxkamadda ugu sarraysa dalka ayaa Jimcihii amar kooban oo ay soo saartay ku diidday iskudaygaas iyadoo xukuntay in Texas aanay lahayn awood sharci oo ay kiiska ku keeni karto maxkamadda.
Xukunkaas ayaa waxa uu ka dhigan yahay dhabarjab kale oo soo gaaray Mr Trump, kaas oo iyada oo aanu wax caddayn ah u hayn hore u soo jeediyay in natiijadii doorashadii madaxtinimada ee Nofeembar ay suuragal tahay in go’aankeeda lagu dhammeyn Maxkamadda ugu sarraysa dalka.
Maxkamadda ayaa bilowgii toddobaadkii tegay diidday dacwad kale oo loogaga soo horjeeday guusha Mr Biden uu ka gaaray gobolka Pennsylvania, iyadoo gaashaanka ugu daruurtay hal jumlo oo ay xukunkeeda ku ridday.
Mr Trump ayaa ku celceliyay eedo aan kala sooc lahayn oo uu ku andacoonayay in “codad aan sharci ahayn” ay horseedday inuu waayo in muddo xileed labaad uu dalka maamulo.
Tan iyo doorashadii, Mr Trump iyo taageerayaashiisa ayaa waxa ay maxkamadaha geeyeen tobannaan dacwo oo ay su’aal ku galinayaan natiijooyinka doorashada. Mase ay jirto hal dacwad oo xitaa u soo dhawaatay in meesha laga saaro guusha Mr Biden.
Musharraxa Xisbiga Dimuqraadiga ayaa waxa uu Mr Trump kaga adkaaday codad gaaraya 306 cod oo codadka ergada doorashada Mareykanka ah halka Trump uu helay 232 cod, iyadoo ergaduna ay yihiin kuwa doorta Madaxweynaha Mareykanka.
Mr Biden ayaa guud ahaan dalka waxa uu 7 milyan oo cod ka horreeyay madaxweynaha. Waxaana la filayaa in ergada doorashada ay kulmaan Isniinta si ay si rasmi ah Mr Biden ugu doortaan inuu noqdo Madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka.